Mipetraka eo ambony seza. Tsara indrindra raha misabaka toy izao ny tongotra amin’izay mifandanja tsara ny lanjan’ny vatana. Mitazona “haltères” na tavohangin-drano amin’ny tanana roa eo ambonin’ny loha. Ampidinina mankany amin’ny lamosina ilay haltères ka tsy hahetsika mihitsy ny sandry fa ny “avant-bras” ihany no miakatra sy midina. Averina in-20 izay fihetsika izay. Manao andiany 3
Ity faharoa ity dia azo atao eo amin’ny sisim-pandriana na sisin-tseza. Mipetraka amin’ny moron’ilay fanaka mihitsy dia mitehina eo amin’ilay fanaka ny tanana roa. Alatsaka ny fitombenana sady aforitra ny lohalika. Atao miara-milatsaka amin’ny vatana ny tanana dia ny tanana no ianteherana hampiakarana ny vatana. Izay fihetsika izay no averina in-20. Manao andiany 3 hatrany.
Fampihetseham-batana fahatelo (sary 5)